Wararka Dibadda – Page 3 – Shabakadda Amiirnuur
Wararkii Ugu dambeeyay Corona..Inkabadan Kun Ruux oo Maalin qura ah ku dhintay Maraykanka.
Waxaa halkooda kasii socda dadka ku la’anaya viruska Corona ee dhawaan ku dhuftay caalamka, waxaana wadamada Yurub iyo Maraykanka ay hadda yihiin kuwa ugu dhimashada badan. Dalka Maraykanka, waxaa saacadiiba dhimanaya boqollaal ruux, iyadoona la la’yahay qaab loola tacaamulo meydadka tira badnidooda awgeed. Afar iyo labaatankii saac ee lasoo dhaafay […]
Maraykanka Oo Xukuumadda Kabul Ka Jartay Dhaqaalihii uu siin jiray.
Wasiirka arimaha dibadda ee Maraykanka Mike Pompeo oo booqasho qarsoodi ah ku tagay wadanka Afqaanistaan ayaa kusoo guul dareystay kulamo waan waan ah oo uu ka dhex waday labada madaxweyne ee xukuumadda Kaabul, kuwaas oo mid weliba uu sheeganayo inuu isagu madaxweyne yahay. Mike Pompeo ayaa kulamo gooni gooni ah […]
Carona Virus oo kusii fidaya Wadamo Hor Leh.
Cudurka Carona Virus ee kasoo billowday wadanka Shiinaha ayaa kusii fidaya Caalamka, waxaana maalinba maalinta ka dambeysa uu gaarayaa wadamo horleh oo aanu horey cudurka ugu jirin. Inkastoo dowladaha Caalamka ay bixinayaan dadaallo ballaaran oo ay ku doonayaan iney kaga hortagaan cudurka, hadana baaxadda uu ku faafaayo ayaa ah mid […]
Todobaadyo kahor ayay ahayd markii ciidamada Nuseyriyada oo taageero ka helaya Rawaafida iyo Ruushka ay duulaanno ballaaran kusoo qaadeen deegaannada xurta ah ee wuqooyiga Suuriya, halkaas oo ay ka arimiyaan Jamaacaadka Jihaadiga iyo kooxaha kacdoon wadayaasha. Si fudud oo dhaqsi leh ayay ciidamada Nuseyriyadu kula wareegeen magaalooyin muhiim ah oo […]
Maamulka Aala-Sucuud Oo Joojiyay Dadkii Cumrada u imaan jiray Xajka.
War kasoo baxay maamulka Aala-Sucuud ee ka arrimiya dhulka barakada leh ee Xarameynka ayaa lagu sheegay in la joojiyay safarada ay dadka cumrada doonaya ku imaan jireen dhulkaas, kuwaas oo kasoo safraya qaar kamid ah wadamada Caalamka. Maamulka Aala-Sucuud wuxuu sheegay in tallaabadan ay qeyb ka tahay dadaallada looga hortagayo […]
Waxaa Aad usii kordhaya dadka udhintay cudurka Karona iyo kuwa kula ildaran gudaha dalka shiinaha oo markii ugu horeysay uu ka bilowday curukaan kaasi oo haatana kusoo fidaya dalal dhowr ah oo ka tirsan qaaradaha Yurub.Aasiya iyo Bariga dhexe. Maanta oo sabti ah Bayaan ay soo saartay dowladda shiinaha ayay […]
Sarkaal Kenyaan Ah oo Is Daldalay Kadib Markii Noloshu Ku Adkaatay.
Sarkaal hore uga tirsanaan jiray Qeybta Adeegga Guud (GSU) ayaa isku daldalay Kenya, gaar ahaan Kaptekiamo ee Waqooyiga Baringo, kadib markii sida la sheegay shaqada laga ceyriyay. Mark Kirui, oo 45 jir ah, waxaa laga ceyriyay Adeegga Booliska Qaranka afar sano ka hor. Taliyaha booliska ee gobolka Baringo Robinson Ndiwa […]
Wararka ka imaanaya wadanka Afganistaan ayaa tibaaxaya in toogasho ay ka dhacday mid kamid ah saldhigyada milliteri ee ciidamada Maraykanka kaga suganyihiin bariga wadanka Afqaanistaan oo ay ku duuleen 19 sano kahor. Qof ku labisan dareeska ciidamada xukuumadda Kaabul ayaa rasaas la dhacay ciidamo Maraykan ah oo ku sugnaa saldhiga […]
Uganda oo Sheegtay In 23 Askari Ay Uga Dhaga Beeleen Dagaalada Al-Shabaab.
Labaatan iyo saddex askari oo ka tirsan Ciidamada Difaaca Dadka Ugandha “UPDF” ayaa dhowkii sano ee lasoo dhaafay ku naafoobay dagaalada iyo qaraxyada ay kala kulmaan Xarakada Al-Shabaab, gaar ahaan waxay ka naafoobeen dhanka maqanka. Ciidankan oo dhibkaasi la noolaa muddo dheer ayaa dhawaan la siiyay qalabyo maqalka ka saacidi […]
Inkabadan 10 Askar Yahuud ah oo ku dhaawacmey Weerar ka dhacay Al-Qudus.
Wararka ka imaanaya dhulka barakeysan ee Filastiin ayaa ku waramaya in qof muslim ah uu weerar gaari jiirsiin ah ku qaaday askar katirsan maamulka Yahuudda oo ku sugnaa bartamaha magaalada Al-Qudus. Gaari nooca xamuulka ah oo uu watay qof dhalinyaro Filastiini ah ayaa jiiray askar Yahuud ah oo ku sugnaa […]